Nei Trump akakunda paSarudzo dzemutungamiriri wenyika muna 2016?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Nei Trump akakunda paSarudzo dzemutungamiriri wenyika muna 2016?
Nei Trump akakunda paSarudzo dzemutungamiriri wenyika muna 2016?
Nekuda kwei Trump akakunda sarudzo dzemutungamiriri wenyika yeUSA?
Pachinzvimbo chekutarisa izvi nezvikonzero zvenyama, regai tione kuti tingawanei munezvemweya.
Zviitiko zvikuru hazvibvi pakuti vanhu varikufungei kana varikudei. Mwari anoita zvinhu nenzira yake. 9/11 raive zuva rebata wabata kuAmerica zvinhu pazvakashanduka chivakwa cheTwin Tower chikawira pasi. Kutsiva kwakakonzeresa kuparadza kukurusa muhondo kuAfghanistan nekuIraq.
11/9 raive zuva reshanduko raive risina kutarisirwa kuAmerica munhorondo yavo yekusarudza mutungamiriri zvave kuratidza kuti Mwari ave kutanga kuita zvinhu nenzira yakasiyana kune zvatinofunga isu vanhu. Zuva raMwari rasvika here?
Makore 27 akadarika zuva rimwechete iri, chidziro cheBerlin chakaputsika nenzira yaisatarisirwa apo mubati wemakiyi aive pabasa muchidziro cheBerlin husiku hwezuva iroro akakanganisa akavhura musuwo nekuti paive pasina kana mumwe wevakuru vake aive mumba kana aidaira nhare mudzimba dzavo.
Saka iyezvino yava nguva yekutarisira zvisingatarisirike.
Kudzidza, kurasa zvatakadzidza nekudzidza zvitsva ndiyo inobva yava kiyi yedu kuti tirarame.
Vanoziva chaivo zvavakatiudza zvaive marara chaiwo. Havana kana ruzivo rwekuti Mwari ari kufungei.
MaKristu mazhinji akadzungaira zvekuti akabvumirana navo. Saka maKristu akawanda nhasi uno haana fungidziro yekuti Mwari ari kufungei. Isu maKristu tinofanira kurasa zvakawanda zvatinofungidzira kuti iChokwadi mupfungwa dzedu.
Tinozvipira kudzidza zvitsva kubva muBhaibheri pachinzvimbo chekungotevedzera fungidziro dzisiriidzo dzatinoudzwa nevakuru vemakereke edu?
Mwari ane hurongwa hwake hwakanakisa, “Muono wake Mukuru”. Ari kuunganidza vanhu nemarudzi munzvimbo kuitira zano rake renguva yekupedzisira. Kuda kwake kwakanakisa rwizi rwemweya runoerera mukati mezviitiko zverudzi rwevanhu, ruchiyeredza nyika kuenda nayo kunguva yeKuuya kwake kwechipiri nenguva yeKutambudzika kukuru.
Mwari akajekesa chinhu ichi kuna Nebukadnezari:
Danieri 4:32 Uchadzingwa pakati pavanhu, vugaro bwako vuchava pakati pemhuka dzesango, uchadyiswa vuswa senzombe, nguva nomwe dzichapera uri’po, kusvikira watenda kuti wokumusoro-soro unobata vushe pakati pavanhu, unovupa waanoda.
Saka Mwari achaita chokwadi chekuti vanhu vakakodzera ndivo vanotonga kuitira kuzadzisa zano rake guru kunyangwe ivo vaine zvikonzero zvavo.
Abrama, akazotumidzwa kuti Abrahama, akauraya madzimambo kuti anunure mwana wemunun’una wake Roti. Pavakasvika pakugovana zvavaive vawana kubva pahondo, akati Eshkori apihwe chidimbu chaive chake pamugove uyu wese.
GENESISI 14:22 Abrama akati kuna mambo weSodhoma: Ndakasimudza ruvoko rwangu kuna JEHOVA, Mwari woKudenga-denga, muridzi wokudenga napasi.
23 Kuti handingatori rushinda kana rukanda rweshangu, kana chinhu chimwe chezvinhu zvenyu, kuti murege kuzoti, ndini ndakafumisa Abrama;
24 Ini handidi hangu, asi zvakadyiwa namajaya chete, nomugove wavanhu vakaenda neni, vanaAneri, naEshkori, naMamre, ngavatore migove yavo.
Mwari akapa parestina kuna Abrahama senyika yake yechipikirwa. Roma yakaparadza Temberi yemaJuda muna 70 AD ikadzinga majuda muna 135 AD. Muna 1948 Mubatanidzwa wenyika dzepasi rese weUnited Nations wakapa maJuda zvidimbu zvidiki zvitatu zvenyika yaive yapihwa kuna brahama naMwari. Mutungamiriri weEgipita Nasser akaramba achityisidzira kuti aizoparadza maJuda kusvikira vakunda vaEgipita, Syria neJordan mumazuva matanhatu muna 1967. sevakundi vaizotora nzvimbo itsva dzavaive vakunda semugove wavo muhondo. Iyi yaive kodzero yavo sevakundi. Mutungamiriri wenyika yavo ipapo aive Levi Eshkori.
Saka makore anoda kukwana 4 000 mumashure mekupihwa mugove kwaEshkori wekutanga pamugove wake waive wataurwa naAbrahama, nhorondo yakazvidzokorora nemutungamiri wenyika Eshkori achitora mugove wake sewedzinza raAbrahama. Majuda vana vaMwari. Hakuna rumwe rudzi runokwanisa kuita yanano inodzokera kure kwakadaro panguva. Mwari achiri kutaririra nzvimbo yaakapa kuna Abrahama. Saka rambai makatarisa Israeri.
NUMERI 24:5 Matente ako akanaka zvikurusei, iwe Jakobo, nedzimba dzako, iwe Israeri!
NUMERI 24:9 Mumwe nomumwe unokuropafadza ngaaropafadzwe, Mumwe nemumwe unokutuka ngaatukwe.
Tinofanira kudzidza tese. Mwari anorangarira kubvira zvezuva rokutanga saka haana kukanganwa sungano yake chinova chiporofita pachezvacho.
Nhasi uno nyika yeYemeni iri kuzviparadza muhondo yemarudzi nekuita kwematerorisiti. Asi vakakanganwa kuti Israeri payakava nyika pachayo muna 1948, Yemeni (zvisinei nekuti yaive kure neIsraeri) yaive imwechete yenyika nomwe dzakabatana kurwisa Israeri, kuti vaparadze vaIsraeri vagogovana zvavanenge vatora kwavari. Yemen yakatuka Israeri zvino vave kurarama pasi pekutukwawo.
Mumwe nemumwe wedu, kana taponeswa, takazadzwa nekuda kwedu kwakafanana nekadziva katinogona kutuhwina tichienda divi rinotiitira kana kuitira tariro dzedu mukurarama. Uru rwendo rusina kwarunoenda asi kunguva yeKutambudzika kukuru. Kana tichida kufadza Mwari, tinofanira kubuda kubva muzvido zvedu zvisina maturo tichipinda mukuita kwe “Muono Mukuru” waMwari. Tinogona chete kuwana nzira iyi muBhaibheri.
Zano raMwari rakasiyana nekufunga kwedu saka nekudaro rinotitora, tichirwisa nekudanidzira, nerutivi rwatanga tisingatarisiri uye rwatanga tisingadi kuenda kwaruri. Asi iyi ndiyo yega nguva yatinoita zvinodiwa naMwari.
Ndicho chikonzero nei tichifanira kufa kuzvivi. Pese patinogunun’una nekuda kweshanduko, zvinoreva kuti hatisati tafa kune zvatinoda isu. Kana tikafa kuzvido zvedu, zviri nyore kuti Mwari atisaidzire kuti tiite zvaanoda.
Semuenzaniso, Simoni wekuSyreni akamanikidzwa kutakura muchinjiko weMunhu aive akatukwa. “Akasvibiswa” neropa raJesu, aive asisakwanisi kuva chikamu chevaipinda mupasiova yemaJuda. Iye aisaziva chinhu, pasiova yaive iri pakati pekushandurwa kuva imwe sungano itsva iri nani kwazvo. Saka zvichipikisana nekuda kwake iye, akava chikamu chehurongwa hwaMwari hwakanakisa nekuita zvaaive asingadi kuita nemoyo wake uye aive asingatozivi kuti chii chaiitika. akava munhu wekutanga kuva chikamu chepasiovha chaiyo. Saka Mwari anotishandisa patinenge tisingatozivi kuti chii chiri kuitika.
MaJuda akauraya Jesu akavhura musuwo wekupona kwevahedeni nekusaziva asi vaivamhura.
Saka chidzidzo ndechekuti tinowana Mwari muzviitiko zvatisingatarisiri kumuwana nazvo zvisingafungiriki nesu vanhu kubva mune “zvatakadzidza”. Mapepanhau epasi pano nenasiteshi ezvivhitivhiti anotongwa nezvikwata zvemasimba akasiyanasiyana anopa masaisai zvichienderana nezvinangwa zvavo.
Ndicho chikonzero nei vezvesarudzo vekuAmerica vakarasika panyaya iyi. Vakanyanya kutarisa vanhu nendangariro dzavo. Chinhu chekuti maKristu akatenda kutadza uku zvinoratidza kurasika kwaita zvinofungwa nemaKristu. MaKristu akaita sarudzo yekusarudza Hillary vaive vakabviswa zvakazara kubva pamafungiro aMwari uye vari kure neruwadzano naMwari.
Hongu Hillary Clinton aive munhu akati nakei uye munhu akanatswa mune zvematongerwo enyika. Anoziva, akachenjera, agara zvakanyanya mazviri uye anokodzera.
Hongu. Trump akazvitema tsoka munguva zhinji. Muromo wake iye pachake ndiwo waive muvengi wake mukuru. Aingobvotomoka, aituka uye aive asina kugadzirira panhaurirano dzaaiita naHillary.
Asi Zvakadaro zvese izvi hazvina kuita musiyano.
Mwari haana kutarisana neAmerica nhasi uno.
America iri pakaipa, asi ichiri ndiyo iri kufanira kuunza pasi rese muchiratidzo chechikara chinova kusukurudza njere dzevanhu kuti vatende muzvitendero zvemasangano zvisingabvi muBhaibheri. Unokwanisa kuva nekutenda mune chero chinhu chaunoda, chero chisiri muBhaibheri. Masangano, nhasi uno kwaane marudzi 30 000 akasiyana, anounganidza vanhu mumasangano matsvene. Ungano yega yega inoti ndivo vane chokwadi, zvisinei nemusiyano uri pakati pemasangano aya ose. Ichi hachisi chiKristu. Ichi chinonzi “chichechi-chechi”. Makereke aya anotenda mune zvinofungwa nevanhu netsika dzakatangwa neakatanga kereke, kwete mushoko raMwari. MuKristu chaiye anorarama akavimbika kuShoko raMwari.
Chero “vaparidzi veMharidzo” (“ the Massage” vari kuita basa guru rekudyara kutadza mukuita kwavo kwekuda mari, mbiri, nehukuru. Vanoti Gore guru rinoshamisa remuna 1963 raive kuuya kwaShe, rave kunzi kwaive Kuonekwa kwaShe (hameno kuti vanoda kurevei). Zvisinei Gore guru rakanga riri muchadenga makiromita 42 kubva pasi rave kunziwo kuzadziswa kweMutumwa mukuru wekunaZvakazarurwa chaputa 10 anouya kuzomira panyika nemugungwa. Havatiudzi kuti kwaive nemamwe makore maviri mudenga aive ari chinhambwe chemamaira 20 kubva pane rimwe. William Branham aive asipo pakatorwa mifananidzo yegore iri sezvo nguva yekuvhima yakazotanga zuva rakatevera. Saka “masangano eMharidzo” vakabvawo zvakanyanya muMagwaro panyaya iyi, kungofanana nevamwe vese vemasangano. Vanosimudzira zvakataurwa naWilliam Branham kukunda zvavanoita Shoko.
Vakawanda vaparidzi “veMharidzo” vanodzokorora mazwi akataurwa apo hama Branham akaona chiratidzo akati
“kuAmerica kwakasimuka mukadzi akanakisa asi ane moyo wakaipa kwazvo. (hapana chero tsananguro inokwanisa kushanda pana Hillary apa) akabata vanhu nesimba rake rose”.
Ndinotenda kuti uku kwaive kusimuka kwekereke yeRoman Catholic, nekuti ndaiziva kuti zvaigoneka kuti chiratidzo chemunhukadzi achisimuka pamasimba makuru kuAmerica nekuda kwesarudzo huru kubva kuvanhukadzi.
Tsananguro yakazara pamusoro peNguva Nomwe dzemakereke.
Vaparidzi veMharidzo vakawanda, mukumhanyira kwavo kuti vanzi vakangwara, vakaporofita kuti Hillary aizokunda musarudzo.
William Branham aitenda kuti mukadzi aakaona muchiratidzo chake yaive kereke yeRoman Catholic.
Asi kumhanya kuporofita pamusoro pechiitiko ichi chisati chaitika, vachiti vakachenjera, vateveri “veMharidzo” vanotarisisa pane “zvinogoneka” vozvishandura kuita “zvinotoitika” kukunda kuna Hillary (asiri muCatholic). Izvi ndizvo zvinoitika mazuvano mukuparidza Mharidzo kubva pamazwi akataurwa avanoturikira zvisiriizvo, vachivaka kutenda kwavo patsananguro dzavo voga dzinobva pamazwi akataurwa. Saka masangano “evemharidzo” aya akarasika zvakanyanya panyaya iyi (izvi hazvishamisi) saka haana musiyano nemamwe masangano ese vaitsigira Hillary vakabuda pachena kuti havana chavanoziva chaive mupfungwa dzaMwari.
Izvi zvinoratidza kuti maKristu emazuvano arasika zvakadii. Vazadzwa nezvinhu zvavanofunga pachavo vakabviswa zvakanyanya pedyo nekufunga kwaMwari. Zvinongoreva kuti mapofu havasi kuona zviri kuitika chaizvo.
Kana tikasvika pahurongwa hwaMwari hwakarurama, pfungwa dzevanhu dzinorasika. Mune zviitiko zvemazuvano, makereke edu ari kurasika. Vanoita kuti vanhu vaponeswe, zvakanaka, vovadzidzisa kutadza pavanotevera hutungamiriri hwevanhu, zvakashata. Vanowana zvibodzwa zvakanaka pakubatsira nharaunda nekupa vanoshaya, zvakanaka. Asi chingosiya kubvunza muKristu kuti chii chiri kuitika nhasi uno.
Saka Trump anomboita nezvei? Nei Mwari akamuisa pahutungamiri?
Haana kubvira amira kuzvitema tsoka, achingorotomoka mukati menhaurirano dzake naHillary ane hunyanzvi munezvemutemo, vachimusiya kunze muzvikwata zvakasiyana siyana zvinosanganisira hutungamiri uye nevatungamiri vaviri venguva dzakadarika vekwaBush, nekumuzvuzvurudza mutsvina yezvepabonde chinhu chinonyudza chero munhu anoremekedzwa, Trump akangogona kuita chinhu chimwechete nenzira chaiyo- ndechekuti achaita Jerusarema guta guru reIsraeri.
Mutsetse mumwechete uyu waive wakakwana kuti Mwari amire naye.
Sezvaakaita kuna Mosesi, Mwari akavhura nzira pakati pegungwa “remifungo yevanhu vezvesarudzo” vanonzvera vakaudza vanhu vasina kugadzikika vekuUSA kuti vasarudze Hillary. (“Gungwa” rinomiririra vanhu vazhinji vasina kugadzikika muBhaibheri).
Mwari anoshandura pfungwa dzevanhu ovaudza kuti voita sei sarudzo dzavo. Nhaurirano dzaHillary dzaive dziri pachena uye mamiriyoni emari yaakashandisa pakuratidzira zvakaendera mahara. Rutsigiro rwaaive narwo kubva mumapepanhau epasi rose nezvivhitivhiti zvakabuda pachena kuti hazvina maturo.
Panofamba Mwari, vanhurume nevanhukadzi vese vanomira vopererwa.
Hillary aitarisa America nezviitiko zvekunze. Kuna Mwari, izvi hazvina kukwanira. Obama, semutungamiri wenyika, aitya kwazvo kuona Jerusarema seguta guru reIsraeri, kunyangwe seneta weAmerica aive atopasisa pfungwa iyi. Obama akabatsira Iran nenyaya dzayo dzemanyukiriya. Iyi yaive nhamo kuIsraeri.
Clinton angadai akaenderera mberi neporisi yake yezvekunze kwenyika.
Trump, mukuratidzira kwake achitsvaga rutsigiro, akatarisa nyaya dzakawanda dzezviitiko zvemuAmerica zvakamuita kuti asakodzere mumaziso aMwari.
Maziso haasisiri paAmerica. Mwari atendeukira kuIsraeri.
Asi Trump akataura nezveIsraeri, nekuvimbisa kuti aizoita Jerusarema guta guru.
Gwenya duku duku iri rakatungidza simba raMwari rekubvisa hupikisi hwose nepfungwa dzavo dzisina zvadzinoreva. Ita chinhu chiduku Muhurongwa hukuru hwaMwari unowana mubairo wakakura. Simoni wekuSyrini akatakura muchinjiko kwehafu yeawa. Nhasi uno ndiye ega mugari wekuSyrini watinoziva nezita rake. Vakawanda vedu hatitozivi kuti Syrini iri kupi. Asi tese tinoziva pamusoro paSimoni. Pane mubairo mukuru kana ukaita chero chinhu chidiki chiri “muMuono Mukuru” waMwari.
Saka Trump aisiiwa kunze akatora hutungamiri, Seneta, imba yehumiririri, neSupurimu koti. Avanesimba rakazara rekutonga USA kunyangwe mumashure mekutukwa nekurambwa nevatungamiri vebato rake. Vatungamiriri vakambosvibisa Trump nemazai akaora vaya, vakabudirirawo nekudzikisira mafungiro evekumamisha vekuAmerica, izvozvi vagere nawo mazai muzviso zvavo.
Sarudzo idzi iyambiro yakazara iri pachena kwatiri. Zvinhu zviri kushanduka. Tingadai takadzidza kubva pa “Brixit”. Dzaivewo sarudzo dzaipikisa mafungiro edu.
Mumutambo wenhabvu, Leicester City yakapotsa yadzikisirwa gore rakapera, ikaenderera mberi ikakunda chambiyonshipi kuEngland. KuBaseball, veChicago Cubs vakakunda chambiyonshipi yavo kekutanga mumakore 108 kuAmerica. Mune zvinhu zvimwechete izvi chikwata cheIrish rugby chakarakasha chikwata cheAll Blacks rugby chaive chaita mitambo 18 yachaive chatamba chisina kubvira chadyiwa. Kaive kekutanga mumakore 111 kuti Ireland ikunde New Zealand.
Mwari ane zvaari kuedza kutiudza. Vanodiwa vane mbiri vanokwanisa kukundwa.
Saka vane mbiri vanokundwa nevasina tariro. Nenzira dzakawanda Mwari ari kuedza kutigadzirira kushanduko dzatisina kutarisira. Uye havasi vatungamiri vakuru, vanodiwa kwazvo, uye mazita makuru achakunda. Ndevaya vakadzimwa vasina chavari nacho.
Hatisisina kuchengetedzeka mumakereke edu makuru.
Mwari ari kutendeukira kuIsraeri tiri kusiiwa kana tikasashandura nzira dzedu.
Kuva vakaponeswa hakuna kukwana kuri kwega kuti tipunyuke nguva yekutambudzika kukuru. Tinofanira kuziva kuti chii chiri kuitika.
Musi wa 4 Chikunguru 1976 America yakagadzirira mhemberero dzavo dzemakore 200. ndiyo nyika yaive yekutanga kuita makore 200. dzaizova mhemberero huru kwazvo. Vakabva vabviswa pamusoro wenhau. Israiri duku kwazvo, mumutambo wekutapwa, yakasunungura vatapwa vayo kunhandare yendege yeEntebbe kuUganda kwavaive vabatwa nematerorisiti. Kuita kwemauto uku kwaishamisa zvekuti kwakabata munzvimbo zhinji kukatora mukombe munhau dzepasi rese pazuva rimwechete iri apo vekuAmerica vaiedza kuzvishambadzawo zvikuru. Saka Israeri yakawana nzvimbo pamusoro soro penhau yavakawana nenzira yakaomarara. Kuzvikudza kweAmerica kwakasairirwa kure kukazobudira papeji rechipiri.
Mumaziso edu, Mwari aitiudza kuti aitendeuka kubva kuAmerica achienda kuIsraeri.
Asi nyika nemakeke ayo yaive isina kuteerera.
Uto rimwechete chete ndiro rakafa, mutungamiriri wemauto akanunura vakatapwa kubva munzvimbo yekutandarira yepanhandare, Yonni Netanyahu. Aive mukoma wemutungamiri ariko kuIsraeri nhasi uno Benjamini Netanyahu. Saka Netanyahu nhasi uno aripo zvakare ari mutungamiri wemaJuda panguva iyo Mwari ari kuda kununura vanhu vake maJuda, sezvakaitwa naMwari paEntebbe apo umwe Netanyahu aive mutungamiri wemauto ainunura vakatapwa.
Mutungamiri uyu akafa panyama kuti anunure vamwe maJuda. Mesiah wemaJuda akafa kuti anunure maJuda pamweya.
Idi Amini aive mutungamiri weUganda. Mumashure mekunge maJuda akwira ndege aenda, mwanakomana waAmini akamubvunza kuti aizoteverazve maJuda here. Akawana mhinduro yaishamisa kubva kumudzvanyiriri wake aive nenyota yeropa. “Mwanakomana wangu, ava vanhu vaMwari. Kana ukavarwisa havafi vakamira kukurwisa. Zviri nani tivasiye”. (Yambiro yakanaka mubva kumaArabu).
Chidzidzo chekutanga kubva muBhaibheri: Makereke, kunze kwevashoma vanotevera Bhaibheri zvizere, ari kurasika. Kereke yakapotsana neZano raMwari pasarudzo dzichangobva kuitwa idzi. Makereke haachafungi nenzira inofunga naMwari. Chido chaMwari nhasi uno chava pakutendeukira kuIsraeri.
Mwari ari kusiya makereke achisiya America nedzimwe nyika. Iyezvino anyanya kutarisana neIsraeri. Ane hafu yevhiki yakaporofitwa yaasina kupedza nayo nemaJuda mazuva matatu nehafu. Muchiporofita zuva rinomiririra gore. Saka Mwari ane chikwereti chemakore matatu nehafu. Zano guru raMwari nderekudzosa maJuda mumusha wavo wechipikirwa, oita kuti pasi rese rivamukire. Nekutya kuparara kana vasara vari voga, vanomanikidzwa kuvimba nemaporofita maviri Mosesi naEria. (Rangarirai, saSimoni wekuSyrini, tinobatira Mwari zvakazara kana tikamanikidzwa). Varume vaviri ava chete, nemasimba avo anoshamisa, vachaita kuti ruvengo rune vanhu pamusoro pemaJuda ruve nemuganhu. Kupindira kunoshamisa uku kuchaita kuti maJuda akawanda atende mumaporofita maviri aya paanovatungamirira kuti vatende kuti Jesu ndiye Mesia. Rinenge risiri basa riri nyore. Ipapo Jesu anodzoka kuAmagedhoni kuzoparadza vazhinji ava, kudeuka kweropa remarudzo anovenga maJuda kuchadiridzira nekuva manyowa ejecha reIsraeri kwoita kuti nyika iyi ibukire seruva munguva yeMereniyamu.
Sarudzo dzekuUSA dzaivimba nehondo dzeIsraeri dzenguva dzakadarika. Israeri payakava nyika muna 1948, mutungamiriri weAmerica Truman aive wekutanga kuvaona senyika, zvisinei nehupikisi hwakasimba hwaivepo. Israeri yaida rutsigiro urwu payairwiswa nehondo shanu dzemaArabu.
Musarudzo dzegore 1949 sangano raTruman reDemocrats rakapatsanurana kuva mapato matatu anopikisana saka aive asisina tariro pakupikisa sangano raDewey reRepublican. Zvakaita kuti pepanhau reNew York Times rinyore papeji rekutanga kuti Dewey akakunda musarudzo sarudzo dzisati dzamboitwa. Vatsigiri veRepublican vakawanda vacho vaive varimi. Mwari akaita kuti kunaye mvura zhinji munzvimbo dzakatenderedza Mississippi neCalifornia yekumusoro dzaive nzvimbo dzekurima dzeRepublican. Kwakaita majahwi akawandisa zvekuti maRepublican akatadza kubuda kuenda kunovhota. Truman akakunda akaenderera mberi achitsigira nyika itsva Israeri.
Muna 1972 Nixon akakunda sarudzo dzekuAmerica mumashure mekubirira paWatergate. Asi zvisinei nekuita kwechikuruku uku akakwanisa kugara pamasimba kwemakore maviri, zvisinei nekuratidzira kukuru kubva kuvanhu. Akabva azosiya muna 1974. Nei kusavimbika uku kwakatenderwa kurarama muWhite house kwemakore maviri?
Muna 1973 maArabu akapinda muIsraeri pasina aitarisira vakaparadza kwevhiki rose, kusvika vava pachinzvimbo chekupedzwa. Nekupererwa mutungamiri wemaJuda Golda Meir akachaira Nixon runhare achikumbira zvombo zvitsva. Nixon akarangarira zvaaive amboudzwa naamai vake achiri mudiki. “Richard, kana ukakwanisa kuitira Israeri chimwe chinhu, ndapota uite. Vanhu vaMwari”. Saka Nixon akaronga zvombo nezvimwe zvemuchadenga. Zvombo izvi zvakabatsira Israeri ikakunda hondo iyi.
Saka Israeri yaida rubatsiro rwaNixon muna 1973. akaita zvaidiwa naMwari kuti aite, akagona kugara pamasimba kusvikira Israeri yabuda panjodzi. Mubairo wake? Aifanira kuenda kujeri nekusavimbika kwaaive aita, asi akaregererwa nemutungamiri wenyika.
Israeri yakava sei nyika yakazvimiririra? Nekuda kwaHitler. Hitler akauraisa maJuda 6 miriyoni negasi muHondo yePasi rese yeChipiri. Pasi rese raive rarwadziwa zvakanyanya zvekuti rakanzwira maJuda aiuraiwa aya tsitsi kwechinguvana. Mubatanidzwa weUnited Nations, nekukunda kwemavhoti maviri, rakabvumirana kuti vapihwe musha wavo Palestine kuti vachengetedzeke varimo.
Hitler akauya sei pahutungamiri? Akapinda mubato duku raisazivikanwa reDemocrat akatanga kuratidzira achitsvaga rutsigiro.
Akaregererwa achinzi haana maturo musarudzo dzese dzaakakwikwidza.
Akashambadzwa zvakaipa zvake akatsvinyirwa zvakanyanya nevakuru veGermany.
Zvisinei nezvese izvi muna 1933 akabva aitwa Chancellor, zvino mudzvanyiriri weGermany.
Akabva atanga kuuraya maJuda zvakaita kuti vapihwe musha wavo wechipikirwa. Saka hutsinye hwaHitler hwaakaita achisimuka pasimba uye kuparadza kwake zvese zvaive muhurongwa hwaMwari.
Saka tarirai Israeri. Ndiko kwakuenda Mwari.
Mwari arikuda chete kuzadzisa chiporofita.
Saddam Hussein akatangazve kuvaka guta reBabironi, akabva apamba Kuwait. Bhaibheri rinoti Babironi haizovakwizve. Saka Mwari akashandisa mutungamiri wenyika George W Bush kuti adzikamise Saddam muhondo yeGulf yekutanga. Saddam akasiya migodhi yeoyiri 600 ichitsva muKuwaiti. Hondo iyi yakadudzirwa ichinzi gwenzi rinopfuta moto. Gwenzi rinopfuta rakaonekwa naMosesi ndiro raive kutanga kweEksodho yekutanga kubvisa maJuda kuEgipita vachienda kuPalestina.
Hondo yeGulf yekutanga yemuna 1991 yaive rimwe “gwenzi rinopfuta” yambiro kwatiri yekuti Mwari vave kudzosa vaJuda kuIsraeri.
Vanhu vakafunga kuti zvaive pamusoro peoyiri chete, chaive chinangwa cheAmerica, asi Mwari akashandisa Bush kuti azadzise chinangwa chake chaicho chaive kumisa kuvakwa patsva kweBabironi.
Kwaivewo kumutswa kwedu kutiudza kuti Mwari ave kudzokera kumaJuda, uye kuti avadzosere kuPalestina uko Mosesi (naHerija) vachadzoka kuzovatungamirira mukati menguva yeKutambudzika kukuru.
Mumashure mechinguva chakati kuti Saddamu akatangazve kuvaka Babironi. Saka Mwari akatumira George W Bush kuti apedzise kuuraya Saddamu. Mwari haasi kuzotendera kuti Babironi rivakwezve. Oyiri yeIraq yaingove chirauro chakakwezva America kuti ipinde muhondo yeGulf yechipiri muIraq. Kumisa kuvakwazve kweBabironi ndicho chaive chinangwa chikuru chaMwari.
Parizvino Israeri inoda ruchengetedzo kubva kuvavakidzani vayo Syria, Hezbollah neHamas.
Mugore 2006 Israeri yakarwa hondo inotyisa neHezbollah zvikaita sekuti Hezbollah yakanga iri pachinzvimbo chiri nani. Saka Mwari akachengetedza sei Israeri? Hondo yemarudzi yakatanga kuSyria mutungamiri wenyika Assad akadaidza Hezbollah kuti imubatsire. Saka dzese Syria neHezbollah dzakabva dzasungirirwa muhondo dzemarudzi idzi saka dzaisakwanisa kutanga hondo neIsraeri. Saka Israeri iri pakanaka kwechinguva. ISIS yakabva yauyawo kuti Iraq neSyria dzirambe dzakabatikana. Kurwisa ISIS kunoreva kuti Syria neIraq hazvichakwanisa kurwisa Israeri. Saka Mwari akapa maJuda nguva yekuzorora. Kurwisa ISIS kunotora mari zhinji saka parizvino Iraq haisisina mari zhinji kuti ivake Babironi.
Parizvino makereke munyika nevemasangano “eMharidzo” vanovata apo vanoti “teverai-mutungamiri- wangu” nekumwe “kubvotomoka kwebofu”. Ndapota rangarirai kuti muMagwaro hamuna chinhu chakaita se “kereke yeMharidzo”, sezvazvingori kuti hamuna chinhu chinonzi Methodist chechi muBhaibheri. Kana muchida kuva vanhu vanotevera Bhaibheri, chingozvidaidzai kuti maKristu.
Asi Mwari akatitumira shoko rekutimutsa guru nezvakabuda musarudzo zvanga zvisingatarisiriki.
I VAKORINTE 15:46 Asi zvomweya hazvizi zvokutanga, asi zvokuberekwa; tevere zvomweya.
Mwari anotumira yambiro yezvinhu zvatinoziva pakutanga. Kuzunungutswa mune zvematongerwo enyika kwakabata nyanzvi dzazvo dzakavarairwa. Parizvino vanhu vekuAmerica vakufanira kushandura rutivi rwavaienda.
Asi rangarirai kuti “The Trump” zviri muMagwaro.
Kutaura uku kunoshandiswa sechikamu chezviitiko zvenguva yekupedzisira.
Saka, muchiitiko chezvatinoziva zvesarudzo dzevatungamiri “the Trump” Mwari ari kutiyambira kuti zviitiko zvikuru uye zvatisina kutarisira zvemweya zviri kuuya. Tese tiri kufanira kuzoshandura rutivi rwatinoenda, totevera Magwaro zvakakwana, kana kuti toenda muKutambudzika kukuru.
I VATESARONIKA 4:16 Nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nokudamidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda (trump) yaMwari: vakafa muna Kristu vachatanga kumuka.
Mwari ave kudzokera kumaJuda.
Chiitiko chiri kutevera kukereke kumutswa kwevakafa munaKristu mukati menguva nomwe dzemakareke. Ipapo tichanzwa “hwamanda” yaMwari ichitidaidza kuDenga.
Asi kana zvinhu zvatinoziva zvekuberekwa mazviri zviri zvekutevera, “hwamanda” yaMwari ichange isingatarisirwi, ichitaurwa nezvayo mumakereke nenyanzvi dze “Mharidzo” vachipikisa. Asi zvekare vanenge vachikanganisa. Kana magumo asvika, vatungamiri vemakereke nevatungamiri “veMharidzo” vachapikisa hwamanda chaiyo yaMwari sekupikisa kuri kuita veRepublican the Trump. Nekuda kwei?
Aive akasiyana. Vaisada kushandura mafungiro avo. Vaisada kurasa zvavaive vadzidza pakukunda musarudzo zvaive zvisiri zvaizoitika. Vaizvikudza zvakanyanya kuti vatangidze kudzidza zvinhu zvitsva. Saka vatungamiri veRepublican vakapedzisira votaridzika semarema.
Zvimwechete zvichaitika kuvatungamiri vemakereke nevatungamiri “veMharidzo” pamagumo.
Hutungamiri hwevanhu ndicho chinhu chimwe chiri kutadzisa makereke neve “Mharidzo”. Tarisisai munezvematongerwo enyika. Vatungamiri veRepublican vese vaimhura nekuzvidza Trump. Vamwe havana kutomuvhotera. Parizvino vaane nyadzi pazviso zvavo nokuti akadzosera maRepublican pasimba zvisingafungidziriki.
Vaive vatungamiri vechitendero vechiJuda vakaudza maJuda kuti vati Kristu ngaauraiwe.
Pakupedzisira vatungamiri ndivo vanotitungamirira mukutadza.
MaKristu achamuka riini kuti azvifungire, pachinzvimbo chekutevera “chichechi-chechi” vachipfugamira zvese zvataurwa nevatungamiri vavo.
Dai Hillary akakunda zvingadai zvisina chekuita nekutaura kweBhaibheri maKristu neve “Mharidzo” vangadai vakadzokera kunorara zvakanakisa munhowo dzavo tsvene vatungamiri vachivabhabhadzira vachivaudza kunaka kwavo.
Nekukunda kwaTrump takutofanira kumira negumbo rimwe. Magumo anodaro ava pedyo.
Saka Mwari akatumira yambiro yekutizunza yatinorega kuteerera nekuda kwedu.
Hatisisina kuchengetedzeka mumakereke edu ashanduka kuva “dzimba dzemaungira”. Kwatinoungana neavo vanobvumirana nesu. Inzvimbo yakanaka yakachengetedzeka. Tinoramba tichisimbiswa kuti tiri kugona. Kurongwa kwepfungwa dzedu pakadaro kunoita kuti tisabvumirane nekumwe kutaura kwakasiyana neuku. Tinokuramba zviri nyore sezvo takasukwa njere mukutenda chinhu chimwechete chekuti “mafungiro angu akanaka”. Tinotya kuzvipikisa nekuti kana tikangoedza kutenda kuti tinotadza, ipapo hatizongoteveri vatungamiri vedu vanotifungira. Tinobva tatanga kuzvifungira izvozvo zvinozoparadza rusununguko uye kupombonoka kwedu. Saka tinobva tashaiwa kuti totevera zvipi. Brexit yakadzidzisa vanhu kuti zvakakosha kutaura nekukurukura neavo vavasingabvumirane navo. Vehurumende pavanoshoropodzwa vanogadzirisa kutadza kwavo. Vemakereke havana ruzivo urwu sezvo vasingateereri uye vachiramba kushoropodzwa. Vatungamiri vemakereke vakaita makereke 30 000 akasiyana siyana “dzimba dzemaungira” umo vanhu vemukereke vanodzokorora zvataurwa nevatungamiri vavo. Sangano rega rega rinoti rinonatsa. Vekunze vanoona riri jee sezvo kuine misiyano yakawandisa. Vanhu vashoma ndivo vanozokwanisa kubuda mumambure aya nekuzodzokera muShoko rakanyorwa.
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodikia uti:
Iyi ndiyo kereke yechinomwe kana kuti yekupedzisira. Raodikia zvinoreva kuti “sarudzo dzevanhu”. Izvi zvinobva zvatsanangura zvakazara nguva yatiri kurarama nhasi uno.
ZVAKAZARURWA 3:17 Nokuti unoti, ndakafuma, ndakafumiswa, handishaiwe chinhu; usingazivi, kuti ndiwe unovurombo nenhamo, uri murombo nebofu usine-chekufuka.
MaKristu anoti hupfumi humbowo hwekutendera kwaMwari. Asi kutaura uku kuri ndiko kutukwa kwakazara kwenguva yekereke yedu nhasi. Takava kereke yakaramba Shoko, asi tisingazvizivi. “Hatishaiwe chinhu”. Sangano rega rega neve “Mharidzo” havadi chero kugadziriswa. Hakuna munhu anobva kunze anoteererwa sezvo kusina munhu anobva kunze ane chokwadi chiri nani pane chine vatendi vemusangano dzvene iroro.
Asi Jesu ari kutaura nekereke achiitsanangura se “bofu”. Hakusina kereke ichiri kutevera Shoko nemazvo. Chitendero chave kubva pamafungiro evanhu, tsika nemashoko akabatwa paitaura vanhu. Kwete mavhesi akanyorwa muBhaibheri.
ZVAKAZARURWA 3:20 Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza; kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova, ndichapinda kwaari, ndicharayira naye, naiye neni.
Uku ndiko kutukwa kukuru kwemakereke edu nhasi uno. Jesu Kristu akamira kunze kwemukova. Ndiye Shoko. Hakusisina makereke arikuparidza sezvazviri kubva muShoko rakanyorwa. Dai vaidaro Jesu angadai ari mukereke.
Jesu ndiye musoro wekereke. Hakuna kana munhu wenyama akatsanangurwa muBhaibheri semusoro wekereke. Asi vafundisi nevatungamiriri vevanhu vanozviti ndivo misoro yemakereke avo. Hakuna munhu anokwanisa kuita misoro miviri. Kana mufundisi achiti ndiye musoro wekereke yake saka musoro chaiwo haungave urimo mukereke imomo. Ikereke yamufundisi, kwete kereke yaJesu Kristu.
RUKA 18:8 Asi Mwanakomana womunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Ichi chiporofita chakaitwa naJesu chinotuka maKristu. Takaita “chichechi-chechi” chinozadzisa mazano evanhu. Jesu ari kutsvaga vanhu vanotenda kuBhaibheri chete. Uye haana chokwadi chekuti achavawana. Mumashure mazvose, vanhu vasere chete ndivo vakakunda panguva yaNoa.
Saka vangani vachakunda pamaKristu anosvika mabhiriyoni maviri ariko nhasi?
VAROMA 10:17 Naizvozvo kutenda kunovuya nokunzwa, nokunzwa kunovuya neshoko raKristu.
Tarisai mufananidzo. Chirayiro chakagadzirwa vanhu vose vaive vakokwa vakaramba kuuya. Jesu anoda kutora mukadzi anotenda kuBhaibheri kuenda naye kudenga kumutambo wemuchato neGwaiana asi maKrustu akabatikana zvakanyanya nezvido zvavo zvenyama nendudzi dzavo dzakasiyana siyana “dzechichechi-chechi”. Saka vayeni vakakokwa, maKristu akaponeswa, vacharambwa kumuchato saka vachapinda munguva yeKutambudzika kukuru. Mwari anobva atora vanhu vasingazivikanwe uye zvirema nemapofu avo vanorambwa nemakereke. Ava havana misha, havana makereke avanoti avo, sezvo vari vanhu vasingadiwe vanotetereka mudzinzira, mumikoto nemuruzhowa. Ava havana rusununguko kana nzvimbo dzekupombonoka vari, havana kubudirira kunovaita vakasarudzika. Vakapararira saka vanouyiwa navo kubva kwese kwese, vasingadi. Havana vanhu vanovatungamirira sezvo kusina mbiri kana mari ingawanikwe pasi peruzhowa. Uye varombo.
RUKA 14:16 Iye akati kwaari: mumwe munhu akagadzira chirayiro chikuru, akakokera vazhinji:
17 Akatuma muranda wake nenguva yokurayira kuti audze vakanga vakakokerwa, kuti; Vuyai, nokuti zvose zvagadzirwa zvino.
18 Ipapo vose vakatanga nomwoyo mumwe kuzvirevera. Wokutanga akati kwaari; Ndatenga munda, ndinofanira kumbondovuvona; ndinokumbira kuti undirevere.
19 Mumwe akati; Ndakatenga nzombe dzamajoko mashanu, ndinoenda kunodziidza; ndinokumbira kuti undirevere.
20 Mumwe akati: Ndawana mukadzi, naizvozvo handingavuyi.
21 Muranda akavuya akaudza ishe wake izvozvo. Ipapo mwene weimba wakatsamwa, akati kumuranda wake, kurumidza ubude kunzira huru neduku dzomumusha, uvuye pano navarombo, nezvirema, namapofu, navanokamhina.
22 Muranda akati; Ishe izvo zvamaraira, zvaitwa, asi nzvimbo ichipo.
23 Ishe akati kumuranda; Buda kunzira nokuvuzhowa, uvagombedzere vapinde imba yangu izare.
24 Nokuti ndinoti kwamuri; hakunomumwe kunavarume avo vandakokera, ucharayira chirayiro changu.
MaKristu anhasi akaponeswa anozvikudza uye asingade chiro vanotenda kuti ndivo vachakunda panodzoka Jesu, havangakundi.
Saka Mwari achashandura vasina kuvaita vakundi.
Ndicho chidzidzo chatinodzidza kubva kuBrixit nekusarudzwa kwaTrump kuUnited States. Vanhu vakati Trump haangakundi nekuti haana kukodzera kubata basa iri. Kukanganisa kwake nekupotsa kwake kwakananikwa pachena-chena.
Kuchirayiro chemuchato neGwaiana, Jesu akati “huyai nevarombo, zvirema, vanokamhina nemapofu”. Vanhu vese ava kana takazvitarisa havana kukodzera kukwanira kukunda zvakare. Asi ndivo vachakunda.
Kusarudzwa kwaTrump kunofanira kuva yambiro huru kwatiri tese. Hamuna ruchengetedzo mukereke kana mumapoka “eMharidzo”. Ivai nechokwadi chekutevera Shoko mune zvese zvamunotenda. Zvakare musarambe kugadziriswa kunobva mumavhesi emuBhaibheri. Vamwe, vari kunze kwekereke yenyu, vanokwanisa kukubatsirai. Vanhu vanokutungamirirai havazivi zvese.